Mitohy ny tantara … ratsy | NewsMada
Mitohy ny tantara … ratsy
Isan’andro, rehefa avy nandeha tany amin’izay nombany avy ny mpianakavy na mpifanolo-bodirindrina, tsy vitsy ny mifampanontany hoe : « Inona indray ny vaovao any ? ». Na samy sahirana amin’ny fitadiavana aza mantsy, mahaliana ihany ny fivoaran’ny toe-draharaham-pirenena, iankinan’ny hoavin’ny taranaka mifandimby.
« Nafonja » izay fivoarana izay, tamin’iny faran’ny herinandro iny, izay nanambaran’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana (HCC) ny amin’ny hametrahan’ny governemanta fialana faobe. Raha araka ny lalàna, tokony hotanterahina androany izany ary hotarihin’ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier.
Ho tohin’izany, mbola araka ny lalàna ihany, hanolotra izay handimby ny toeran’ity lehiben’ny governementa ity ireo manana ny maro anisa eny amin’ny Antenimierampirenena eny. Tsotra sy mazava ary tokony tsy hisy olana ny fanatanterahana izany, saingy mbola mipetraka indray ny olana : an’iza marina ny maro an’isa ?
Any amin’ny firenen-kafa, indrindra ireo efa mandroso, roa na telo, farafahabetsany, ny antoko politika. Mazava tsara ny firehan-kevitr’izy ireo, toy ny hoe repoblikanina sy demokraty any Etazonia. Eto amintsika, tsy fantatra akory izay tena hevitra iandanian’ilay antoko politika. Ny mpitondra sasany aza moa, efa tonga eo amin’ny fitondrana vao namorona antoko politika. Izay nifidy azy ireny koa no « vendrana » e !
Vokatr’izay tsy fisian’ny foto-kevitra politika mazava izay, azo lazaina ho lasa « kilalao maloto » mihitsy ny fanaovana politika eto amintsika. Nametraka tantara ratsy sy nanaratsy ny tantaram-pirenena ary namarina an-kady ny tanindrazana ny fivadihana palitao, fanaon’ny mpanao politika malagasy.
Tsy henatra tsy tahotra, lasa manohana ny fitondrana na mivadika aminy ireo rehefa mavesabesatra ny « mena miraviravy » … Ny vola io e ! Ankehitriny, miverina indray ny voka-dratsin’io fivadihana palitao io. Mitohy ny tantara … ratsy.
Barea de Madagascar: nikotrana teny amin’ny Pedro 14/11/2018
Kitra: ny sekretera jeneraly no hitantana ny FMF 14/11/2018
Badminton: mitombo traikefa ireo mpanazatra 14/11/2018
EPP Moratsiazo: notokanana ny efitranon-tsekoly vaovao 14/11/2018
Fahasalamana: nitombo roa ireo matin’ny aretina pesta 14/11/2018